Waa kuma ninka caalamka oo dhan laga raadinayo | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Waa kuma ninka caalamka oo dhan laga raadinayo
Waa kuma ninka caalamka oo dhan laga raadinayo
XIGASHADA SAWIRKA,GERMAN FEDERAL CRIMINAL POLICE HANDOUT
Dowladda Jarmalka ayaa dhiggeeda Ruushka ka codsatay inay ka caawiso soo qabashada Jan Marshalik, oo ah qofka labaad ee ugu sarreeyay hay’adda ka shaqeyneysay arrimaha maaliyadda ee Waircard – oo laga leeyahay dalka Jarmalka – taasoo dhawaan lagu dhawaaqay in lagu yeeshay deymo aysan iska bixin karin.
Marshalik waxaa lagu qeexay inuu yahay qofka ugu horreeya ee ay sida weyn u doondoonayaan booliska adduunka (Interpol), mas’uuliyiinta jarmalka ayaana doonaya inay ku sameeyaan baadhitaan ku saabsan halka ay ku maqan tahay lacag lagu qiyaasay 2 bilyan oo euro.
Lacagtaas ayaa la sheegay inay ka mid ahayd dhaqaalihii ay hay’addan gacanta ku heysay.
Tan iyo markii Marshalik la waayay dabayaaqadii bishii July, waxaa lasoo bandhigay macluumaad badan oo ku saabsan howlaha uu qaban jiray ninkan. Xogta laga shaaciyay ma aha oo kaliya mid ku saabsan arrimaha maaliyadda, balse waxaa sidoo kale la fashilay sida uu ugu lug lahaa arrimaha siyaasadda, sirdoonka iyo dagaallada ka socda meelo ka mid ah caalamka, sida Suuriya iyo Liibiya.
Yurub oo si weyn u raadineysa Anis Camri
Nin 35 sanno ka hor ka goostay ciidammada Mareykanka oo la qabtay
XIGASHADA SAWIRKA,CHRISTIAN ENDER
Qoraalka sawirka,Hay’adda Waircard waxay sheeganeysay inay kaalinta ugu weyn ka qaadaneyso horumarinta nidaamka maaliyadda adduunka
Waxa sida aadka ah loola yaabban yahay waa in ninkan uu sannadihii ugu dambeeyay gudahooda Ruushka kaliya u safray in ka badan 60 jeer. Inta badan socdaalladii uu ku tagay waddankaas waxay qaateen dhowr saacadood oo kaliya.
Ka hor inta aan raadkiisa oo dhan la waayin, Marshalik markii uu ka baxayay Jarmalka wuxuu iibsaday tigidh safar oo uu ugu socday dalka Philippines, halkaasoo uu sheegay inuu ka doonayo lacag 2 bilyan oo euro ah oo ku kala jirta labo bangi oo waddankaas laga leeyahay.
Waaxda socdaalka ee Philippines ayaa xaqiijisay inuu dalkooda soo galay, uuna ka dagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Manila, kaddibna uu uga sii gudbay waddan kale oo ku yaalla Koonfur-bari Aasiya.
Goor dambe waxaa soo baxay warar sheegaya in arrintaas aysan ahayn mid sal iyo raad leh, ninkanina uu ku dhuumanayo meel ka mid ah magaalada Moscow, halkaasoo ay ku ilaalinayaan sirdoonka Ruushka.
Sidaas waxaa lagu ogaaday baadhitaan ay sameysay hay’ad lagu magacaabo Billing Cat Foundation oo kaashaneysay wargeyska isbuuclaha ah ee Der Spiegel, oo laga leeyahay Jarmalka.
Qoraalka sawirka,Fadeexadda soo wajahday Wirecard waa mid aan horay uga dhicin taariikhda maaliyadda Jarmalka
Bishii July, wargeys kasoo baxa Ingiriiska, oo lagu magacaabo Financial Times, ayaa daabacay maqaal dheer oo ku saabsan baadhitaanka lagu sameeyay ninkaas.
Sida uu sheegay wargeyskaas, ninkan wuxuu si gaar ah ula socday dagaalka dalka Liibiya, isagoo mar ku dhawaaqay inuu qorsheynayo qalabeynta 15,000 oo qof oo ku sugan Liibiya, taasoo ujeeddada uu ka leeyahay uu ku sheegay inay tahay dhaqaale raadin isagoo kaashanaya dadka u dhashay Ruushka.
Mahsruucaas wuxuu ku billowday shaqaaleysiinta dad u dhashay waddanka Austria iyo khubaro dhinaca amniga ah oo caalami ah. Waxaa taas looga faa’iideysanayay wadashqeynta saaxiibtinnimo ee ka dhaxeysa Austria iyo Ruushka, oo ah arrin ay taageereyso dowladda Ruushka.
XIGASHADA SAWIRKA,CHRISTOF STACHE
Qoraalka sawirka,Saraakiishii ugu sarreysay Waircard, oo uu ka mid ahaa Marcus Bauer, ayaa la xidhay markii uu baxsaday Marshallek
Intaas wixii ka dambeeyay waxaa soo baxay jahwareer badan iyo xog ku saabsan in madaxa mashquucaas uu Marshalik ka heli jiray Marshalik macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan sirdoonka Austria, kuwaasoo si sharci darro ah lagu soo helay.
Wali ma cadda sida uu Marshalik ku heli jiray warqadahaas.
Waxa uu wargeyska Financial Times sheegay in hay’adda uu sameeyay ninkan ee Waircard loo adeegsanayay kala gudbinta lacagaha musuqmaasuqa ee la geeyo bangiyada dibadda
Previous articleSargaal ka tirsan ilaalada Madaxtooyada oo Meydkiisa laga helay Hoteel ku yaalo muqdisho
Next articleRa isal wasare Rooble oo kulmay Xildhibaanada Hawiye
Source: Qoor Qoor and Emirati officials hold secret meeting in Nairobi
Ciidama Etoobiyaan oo isaga baxaayo Soomaaliya